Kupinda muZimbabwe : Sekuru's Stories Kupinda muZimbabwe : Sekuru's Stories
Vachipinda muno umu vakaona kuine shiri nevanhu. Mhuka kwakusina. Ndopakazouyawo mhuka dzichiteverawo futi, dzakatevera vana vaSoko. Mhuka ndodzakazouya pashure, vanhu vave muno umu. Asi shiri ndodzakatanga.
Ndopavakachiti vamwe vakadzika vachienda uko, vamwe vakakwidza vachienda uko, vamwe vakakwidzawo vachidzokera uko vachitevedza mvura kuti vadzokere kumashure kwavakabva kunoona vamwe vanhu kuti variko here? Saka vaingoenda vachingopararira kusvikira vazadza nyika yese ino iyi.
Saka muno umu, kutaura kwavo vanoti pavakapinda muno umu vakaona kuine vanhu vaye vapfupi, vanaMandionerepi. VanaMandioneripi havambozivikanwa kuti vakabva kupi. Asi vanotiwo dzakatanga ishiri, ndokuzouyawo vanaMandionerepi ava.
Vanonzi maHottentots neVarungu. Kunzi maHottentots vakanga vavapa nhingi, hot stuff, doro riya riya. Varungu ndovakazovapa zita iroro.
Isusu taiti vanaMandionerepi nokuti vaikubvunza, “Mandionera kupi?” Ukati, “Ndakuonera apa,” vokurwisa. Vaikurwisa nokuti havaida kunzi vanhu vapfupi.
Saka vakakubvunza kuti, “Mandionerepi?” Kuti, “Ha, ndakuonerai ukoko!” Zvainzi, “Ha, munhu akanaka.” Zvainzi munhu akanaka. Nokuti ndakuonerai apa? Vanokurwisa kusvikira vakuuraya.
Saka ndovakawanikwa vari muno. Vanhu avo vakazosaidzirwa vachingoenda, vachingoenda, kusvikira vanosvika kuNamibia, ndokwavakanogara.
Vaive vanhu vaita basa rekuvhima vachidya uchi nenyama. Vaidya uchi zvokuti unogona kuita manyoka paruware, vofunga kuti munhu arasira uchi ipapa. Votombosvika voti, “Ha! Aiwa, itsvina.”
Vaidya uchi nokuti kurima vanga vasingarime. Saka vakauya vairima, vairima njera. Njera rimwe zita tinoti zviyo. Saka ndozvavairima kunyanya, nokuti ndorainge riri sadza remuno umu.
Kufamba kwavaiita, vaifamba vachiti kana vaive nenzara vokumbira pamuti unonzi mumvumira. Saka vaikumbira sadza. Pavakazotanga kuchiti vakugara munzvimbo dzavo vatemwa migano yavo naMurozvi vanhu vakugara mumatunhu, vakanga vakurima njera.
Njera vakabva nayo uko kwavakabva. Vakasarawo muEthiopia vakasara vainayo. Vakasara muMali nemuSomalia vakasara vainayo njera. Vakasara vainayo. Saka kwese kana kuEritrea vainayo njera. Saka muno umu tinayo. KuMalawi, handisi kuziva kuti vachiinayo here? Kana kuZambia, handifunge kuti vachiinayo.
Asi muno muZimbabwe irimo nokuti vanhu ndodoro ravanofarira maningi. Ndodoro revadzimu, saka vachiriti doro remukono, ehe. Saka idoro rinodhaka zvakanyanya, saka rinodiwa nevadzimu.
Saka ndomafambiro avakaita.